fambolena ovy - magazine "Potato System"
Tena Label manangom-paty
Akaiky ny fahavitan'ny fambolena ovy any amin'ny faritra Moskoa
Manodidina ny 97% ny volan'ny ovy nomanina no nambolena tao amin'ny faritra Moskoa. Io no nambaran'ny minisitry ny Fambolena sy ny sakafo any amin'ny Faritra Moskoa ...
Fivoaran'ny asa an-tsaha
Araka ny angon-drakitra iasan'ny filankevi-pitantanan'ny indostrialy agro-indostrialy an'ireo vondrona mpamorona ao amin'ny Federasiona Rosiana, hatramin'ny 4 Jona 2021 tao amin'ny firenena iray manontolo ...
Efa ho vita ny fambolena ovy any amin'ny faritr'i Tambov
Raha ny fampahalalana azo avy amin'ny departemantan'ny fambolena isam-paritra dia misy ovy 3,2 hektara nambolena tany an-tsaha ao amin'ilay faritra. 90 ...
Efa ho vita ny fambolena ovy any amin'ny faritr'i Ulyanovsk
Ao amin'ny faritra, ny 96% amin'ny faritry ny lohataona dia afafy. Ny minisitra lefitra voalohany an'ny fambolena Natalya Snezhinskaya dia nitsidika ny Agrotech LLC tao amin'ny distrikan'i Staromainsky, izay ...
Ovy ho an'ny zavamaniry PepsiCo Rosiana amin'ny taona 2021 dia hambolena 19 hektara
Ireo mpamatsy ovy ovy Lay dia nahavita ny fampielezan-kevitra tamin'ny famafazana lohataona. Amin'ity vanim-potoanan'ny fambolena ity dia nanodidina ny 19 ny famafazana ...
Nanomboka namboly ovy ny orinasam-pambolena ao amin'ny faritra Penza
Any amin'ny faritra amin'ny 2021 dia kasaina ny hanome 2025 hektara ho an'ny ovy (orinasa fambolena + toeram-piompiana tantsaha). Io kolontsaina io no hibodo ny faritra lehibe indrindra amin'ny ...
Ny fandrosoan'ny asa an-tsaha any Rosia
Araka ny angon-drakitra ampiasain'ny vondron'orinasa fitantanana indostrialy agro-indostrialy ao amin'ny Federasiona Rosiana, hatramin'ny 17 Mey 2021 tao amin'ny firenena manontolo ...
Vorobyov dia naseho karazana karaoty vaovao tany amin'ny distrikan'i Dmitrov